‘राजनीतिक सम्बन्धले अनुसन्धान रोकिन्न’
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, भाद्र १९, २०७४
११ भदौदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, “अपराधमा राजनीति जोडिए पनि अनुसन्धानमा बाधा पर्ने छैन ।”
तस्वीर सौजन्यः सीआईबी
भर्खर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ; कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
मेरो प्राथमिकतामा आर्थिक र संगठित अपराध छन् । साइबर क्राइम, मानव बेचबिखन, फरार अभियुक्तको खोजी र अनुसन्धान भइरहेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँछु ।
राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेका अपराधको अनुसन्धान गर्न सजिलो छ ?
कुनै मुद्दालाई जटिल नबनाई राजनीति जोडिएका आर्थिक र संगठित अपराधका मुद्दालाई पनि सामान्य बनाएर अनुसन्धान गर्छौं । हामीले हेर्ने अपराधको पाटो मात्रै हो । अपराधमा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि अनुसन्धानमा फरक पर्दैन ।
अपराध नियन्त्रण गर्ने तपाईंका के–कस्ता योजना छन् ?
अपराधको सञ्जाल पहिचान गरेर प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने अपराध नियन्त्रण कठिन छैन । अनुसन्धानको प्रभावकारिताले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । स्रोतसाधन र प्रविधिको सीमितताका बाबजूद पनि सीआईबीले प्रभावकारी अनुुसन्धान गरिरहेको छ । अझै नयाँ योजनाहरू ल्याएर काम गर्छौं ।
अहिले ठूलो विषय बनिरहेको सुन तस्करीमा सहयोगीहरू समातिने, मुख्य व्यक्ति नसमातिने किन होला ?
अनुसन्धानलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने भन्ने कुरा कानूनले निर्धारण गर्छ । सुन तस्करको जालो ठूलो छ र त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पारेको छ । राजश्व अनुुसन्धान विभागलगायतका निकायसँग समन्वय गरेर सुन तस्करीको अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउँछौं । नीतिगत र कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए सुधारेर काम गर्नेछौं ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरेका ‘अपरेसन क्वाक’ लगायतका धेरैजसो मुद्दामा अभियुक्तहरूले अदालतबाट सफाइ पाए; कमजोरी कहाँ छ ?
कानूनी छिद्र पनि छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सीआईबीको मुद्दा चलाउने कानूनी प्रक्रिया फरक परेकाले ‘अपरेसन क्वाक’ मा अभियुक्तहरूले सफाइ पाए । कानूनी छिद्रको पहिचान भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव लिएर अपरेसन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइनेछ ।